Loogu talagalay magacyada safarka oo leh sheeko la sheego! - eTurboNews | Isbeddellada | Wararka Safarka
Bogga ugu weyn » Noocyada safarka ee sheeko sheeg!
Noocyada safarka ee sheeko sheeg!
Waxaan soo dhaweyneynaa warsaxaafadeedyadaada. Hadafkeenu waa inaan u rogno waxyaabo la yaab leh oo dhagaystayaasheena ay jeclaan lahaayeen inay akhriyaan.
Websaydhadu waxay ku koraan nooca saxda ah ee taraafikada. Warbaahinta lacag bixinta ee bulshada, arrimaha bulshada, iyo waxyaabaha ku jira. Noocyada saxda ah ee cuntada casriga ah iyo qorshe, waxaan bilaabaynaa inaan Kordhino kubbadda indhaha iyo beddelidda.
Waxaan ku dari doonaa ereyada kicinta iyo baaritaanka baaritaanka SEO iyo caan ka hor daabacaadda sii deynta iyo sheekooyinka.
Dabcan, waxaan soo dhoweyneynaa hay'adaha PR inay nala shaqeeyaan.
Iyada oo ay ku xiran tahay tilmaamaha tayada, wararkaagu waxay ku qornaan doonaan makiinadaha waaweyn ee raadinta sida Google, Bing, iyo Yahoo.
Ayadoo la raacayo tilmaamaha Google, Bing, iyo Yahoo News, wararkaaga ayaa ka soo muuqan doona bogagga wararka ee u gaarka ah. Tani waxay u abuureysaa aragti weyn astaantaada, wax soo saarkaaga, iyo adeegyada.Codka jamhuuriyadda soomaaliya
Waxaan u badali karnaa sii deyntaada ama sheekadaada mid boodhadh ah oo waxaan ku darnaa maqaalka iyo 9 kanaga Podcasts-ka caan ka ah Livestream, Apple, Spotify, Google, iyo kuwa kale
Waxaan sidoo kale sheekadaada u geyn doonnaa Facebook, Twitter iyo Linkedin, Telegram, iyo barnaamijkeena wararka ee WhatsApp iyo SMS. Sidan ayaa wararkaagu ku gaari doonaa saldhig weyn oo isticmaale ah.
Waxaan ku soo dari doonnaa wararkaaga joornaalada joornaalada, digniinta wararka ee cusub, iyo Browser POP ilaa wararka tooska ah,
Xirfadeena gaarka ah waa safar iyo dalxiis, laakiin waxaan ku fiicanahay noocyo kale oo badan.
halkan guji si aad warkaaga u dejiso